Webhu application kuvandudza inoreva kugadzirwa kwemaapplication pane iri kure server iyo inowanikwa kuburikidza neinternet. Webhu kuvandudza app yakashanduka nekukurumidza pamusoro pemakore gumi apfuura. Yetsika webhu kuvandudza app kwaive nekugadzira akaumbika mapeji ewebhu anogoneswa neinternet, zvisinei, isu ikozvino tauya nenzira refu. Kuuya kweCMS (Zvemukati Management Sisitimu) uye masisitimu ekuvandudza ewebhu zvakaita kuti kusimudzira kwewebhu webhu kuitise basa, nyore uye inotaurika. Anoshanda webhu kunyorera inogona kuwedzera kune rako bhizinesi mashandiro, shanda seyanopindirana chishandiso pakati pebhizinesi nevatengi, kurerutsa kupinda kwedata, uye nekupa iyo yakazara yekuwedzera kune rako bhizinesi. Nhasi, tsika webhu kuvandudza ine yakawanda mikana yekushandira mabhizinesi uye kushandisa simba rayo kunopa bhizinesi rako kuwedzera kumucheto.
Iyo static webhu peji inoendesa iwo iwo iwo ruzivo kune vese vashandisi. Aya mapeji, senge madhairekitori epamhepo, anoshanda nenzira imwechete kune vese vashandisi. Kune rimwe divi, ine simba webhu application mashandiro anoenderana nezvakakumbira zvinoiswa nemushandisi. Zvemukati zvinounzwa nemasaiti aya zvinoenderana nezviito zvevashandisi uye nekudaro zvinosiyana pamunhu wega wega, semuenzaniso, masocial media saiti.
Iyo kambani yakatarisana newebhu kunyorera inovavarira kuunza mhinduro kumatambudziko emakambani emukati uye zviitiko. Aya maficha anosanganisira eprojekti manejimendi manejimendi, zvemukati manejimendi mhinduro nezvimwe.Kune rimwe divi, vatengi-vakatarisana kunyorera vanovavarira kushanda sevamiriri vekambani kune vatengi vavo. Aya maapplication anogadza tambo yekutaurirana uye anovavarira kugadzirisa matambudziko emutengi uye nekuvandudza ruzivo. Semuenzaniso, online tafura yekubatsira, My Starbucks Idea app nezvimwe.
Heino chikonzero nei uchifanira kusarudza NewGenApps yako webhu kunyorera kusimudzira: Nyanzvi yezinga reruzivo ruzivo panguva yekuvandudza yakagadziriswa webhu kunyorera Vagadziri vane ruzivo avo vakashanda pane mamwe anozivikanwa uye achikwira ekuvandudza masisitimu uye mapuratifomu. Nhoroondo yakapfuura yekupa mhinduro dzekucheka kumatambudziko anosanganisira kushandiswa kwema algorithms epamberi senge muchina kudzidza uye otomatiki. Kugona kuyera kuvandudza zvinoenderana nekuchinja zvinodiwa nevatengi. Kugona kushanda neakaonda kutanga-up maitiro ekuvandudza.